Yakawanda Sei Inotsanangudza Vhidhiyo Kugadzira Mari? | Martech Zone
Mugovera, Gunyana 2, 2017 Mugovera, Gunyana 2, 2017 Douglas Karr
My boka yakabudisira kunze akati wandei anotsanangudza vhidhiyo mabasa kune vatengi vedu. Tine vakawana zvimwe zvinoshamisa mhedzisiro pamusoro pemakore paunenge uchishandisa, asi mitengo yasiyana zvakanyanya. Ipo vhidhiyo yekutsanangudza ingaite senge yakatwasuka kumberi, pane zvakawanda chaizvo zvinofamba zvikamu zvekuisa pamwechete inoshanda inotsanangudza vhidhiyo:
chinyorwa - chinyorwa chinoratidza dambudziko, chinopa mhinduro, chinosiyanisa chiratidzo, uye chinomanikidza muoni kuti atore matanho mushure mekuona vhidhiyo.
muenzaniso - mavara uye zviitiko zvinofanirwa kuve zvakanyatsogadzirirwa kuti zvibatanidzane nemuoni zvakanyanya.
Voiceover - yehunyanzvi izwiover yakakosha kurema kwayo mugoridhe, kuunza yako script kuhupenyu uye kuita nemuoni wako.
rira - mhedzisiro uye mimhanzi yepashure iyo yakasanganiswa nehunyanzvi uye isina kuenzanirana neiyo animation yakakosha.
kuchangamuka - kuchangamuka kwakatsetseka, kuenderana, uye kwakatarwa mushe kunounza chiono pamwe chete.
Iyo yakawanda yeanopopota situdiyo inobhadharisa paminiti vhidhiyo sezvo iko kuyedza kunoenderana nezvinodiwa zvinobuda. Izvi hazvireve kuti vhidhiyo yemaminetsi mashanu ichave iri zvakapetwa kaviri nemubhadharo wevhidhiyo yemineti-5, pane zvimwe zvekuchengetedza nguva yaunofamba. Nekudaro, iyo yakareba iyo yako yekutsanangura iri, zvakanyanya iwe unogona kukanganisa maitiro ekuita kweako anotsanangura vhidhiyo. Vhidhiyo huru yekutsanangudza inofanirwa kuvezwa pasi uye kumanikidzwa kune chete iyo chaiyo tsananguro inoratidzwa.
Uye kana zvasvika pamutengo, Andre Oentoro we Breadnbeyond inopa rairo inotevera.
Kusarudza yakachipa pane imwe nguva hakureve kuti uwane mhedzisiro yakaipa, uye kubhadhara mutengo wepamberi hakureve kugutsikana kana.
Maitiro Ekusarudza Yechokwadi Rondedzero Yekugadzira Kambani Kambani
bhajeti - Sefa kuti uwane makambani anobhadharisa mukati mebhajeti rako.
ongorora - Tarisa mapotifoliyo avo uye sarudza iwo aunoda.
Kurukura - Tumira ruzivo nezve izvo zvaunoda kune yako inotsanangudza vhidhiyo.
dzokorora - Kumbira mutengo.
Kutarisira - Ratidza zvakajeka tarisiro yezvauchazobhadhara.
Iwe ungangoda kutarisa kuti uone kana kwete ivo vachadzikisira vatsananguri venguva yemberi sezvo kumakita nemifananidzo yemadhora inosanganisirwa muvhidhiyo yekutanga. Iwe unogona zvakare kuda kubvunza kana paine chero chengetedzo kana iwe ukapa iyo script, iyo mifananidzo, mimhanzi kana chero chimwe chinhu. Usakanganwa kuti anotsanangudza makambani evhidhiyo anongokupa iwe neinobuda vhidhiyo, kwete iyo yakasvibirira mifananidzo. Kana iwe uchida edits, iwe unofanirwa kudzoka utore imwezve quote.
Ramba uchifunga kuti, kunze kwekunge uine ruzivo, anotsanangura vhidhiyo dhizaini chikamu chikamu chekubhadhara - vanogona kuziva zvirinani kupfuura iwe!
Zvakadii Inotsanangurwa Inodhura?
Mune ino infographic kubva kuBreadnbeyond, Iyo Yakazara YeMukati Inongedzo yekusarudza Yakanyanya Tsananguro Yevhidhiyo Zvigadzirwa Kambani, iyo kambani inoratidza maitiro uye zvakadzama matanho ekuti ungawana sei yakanakisa kambani yekushanda nayo. Chimwe chinhu cheiyo infographic iyo yakapihwa, zvakare, ndiyo mutengo wega wega mukuru anotsanangura makambani evhidhiyo. Range iri rakakura - pakati pe $ 1,000 35,0000 uye $ XNUMX pavhidhiyo inotsanangura. Mazhinji emapurojekiti evatengi vedu atakabuditsa kunze akadonha mumadhora zviuru gumi kwemutsananguri wechipiri-makumi mapfumbamwe.
Heano akazara infographic ane anotsanangura vhidhiyo yekugadzira kambani mitengo kubva Wizmotions, Gisteo, Hound Studio, Breadnbeyond, Nyore Nhau Vhidhiyo, Fire Starter Mavhidhiyo, DemoDuck, Epipheo, Tsanangura, uye IdeaRocket. Isu takashandisawo Yum Yum Mavhidhiyo avo vakatemerwa zvakada kufanana naEpipheo.
Tags: BreadnbeyondmutengoDemoDuckEpipheoanotsanangura videoanotsanangura makambani evhidhiyoanotsanangura vhidhiyo mutengoanotsanangura makambani ekugadzira mavhidhiyoTsananguraFire Starter MavhidhiyoGisteoHound Studionganiinotsanangudza sei vhidhiyo inotsanangurwasei kutiIdeaRocketKushambadzira VhidhiyoNyore Nhau VhidhiyoWizmotionyum yum mavhidhiyo
Sep 3, 2017 na10:03 PM
Kuenda nekambani munyika ichiri kusimukira ibheja. Kunyangwe avo vanovimbwa kushanda pazviratidziro zvakaita seSimpsons kana Venture Brothers kana chiteshi seDisney kana Nickelodeon, vanopedzisira vaine huwandu hwakanaka hwebasa ravo rinogadziriswa nevatambi mumatunhu.
Sezvakaita chero masevhisi epasi rose, kune makuru uye anotyisa makambani kwese kwese. Hatina kuona hukama maererano nekwakabva kambani. Takava nerombo rakanaka nerakaipa mumatunhu zvakare.